… Kwaye iigeoblogger zihlanganisene apha… - iiGeofumadas
… Kwaye iigeoblogger zihlanganisene apha…
NgoJuni, 2017 Okufumaneka, egeomates My
Umntu kwakufuneka zibe ingcamango yokuba ehleli ekwindawo enye, iqela eyahlukileyo ngokupheleleyo ngobuntu, abantu bacinga kunye nemeko yenkcubeko, kodwa kunye lobeko ukuba izithethi iSpanish, abanothando ngokuzingisileyo oko kwenzeka kwimeko geospatial.
Le yeyona "Ntlanganiso yeSizwe yokuqala yeGeoblogger", ekhuthazwe ngaphakathi kwisakhelo seCongress yokuGqibela seGejineli yeDyunivesithi yasePalencia. Akuzange kube lula kubaququzeleli, kuthathelwa ingqalelo ukuba kwiiyure ezintathu kulindeleke ukuba babe nombono okhuthazayo wendlela okwenzeke ngayo, yiphi indima abayidlalayo kwimpembelelo yabantu kwaye apho inokuvela khona.
Kuya kuba ngumdla, kuthathelwa ingqalelo ukuba ipatheni yento ekufuneka iGeoblogger ijongeke kungakhange kubekho mntu uchazayo. Ivele nje ngenxa yamanyathelo awodwa, ngokudibeneyo kunye nangokudibana; Abanye bazalwe njengomdlalo wokuzonwabisa, abanye babenomdla okwexeshana, abanye njengengcebiso evela kumntu wesithathu emva kwemini yeebhiya kunye nefry. Kananjalo ayingabo bonke abaphila ngexesha, abanye bade baba nexesha labo lesabatha kwaye baphinda bavela kwakhona.
Nokuba bafika njani apho, ekugqibeleni bangabantu, "iiGeobloggers." Ukumamela loo mxholo kuya kunika umlinganiso owaziwa kancinci malunga nokuba ngubani osemva kolo ngeniso olutsha ngoMvulo kusasa ngo-10 kusasa, ikhonkco kwi-Twitter nge-12 emini, okanye ifoto yeqela lomsebenzi ngolwesithathu. Ngaphandle kwegama okanye uphawu oludumileyo, ngubani uGeoblogger xa simva ethetha ngesihloko athe akabi nayo imizuzu embalwa ngenxa yokuba okulandelayo kuyeza.
Esemthethweni, enoboya, engaqhelekanga, edumileyo okanye engaziwayo, iqela lamaGeoblogger lifikelele kwinqanaba apho impembelelo yomntu ngamnye ingabalulekanga, kodwa iqela ngokubhekisele kwinto eyenzekayo kwi-niche yetekhnoloji esetyenzisiweyo kwisayensi yomhlaba . Nokuba siyayithanda okanye ayithandi, i-akhademi, umxholo ovulekileyo womthombo, inkampani yabucala kwaye, ngaphezulu kwayo yonke le nto, abasebenzisi babucala baye bayazi into ekuthiwa yiGeoblogger ekufuphi kuqeqesho lwabo, xelela kwaye nakwezinye iimeko bacebise kwi-oracle yabo.
Akukho mntu ubabize ngegama lokuba yiGeoblogger, le nje yintlanganiso yokuqala, sinokuthi sive "ngaphambili", kodwa kuya kufuneka sazi ukuba kwenzeka ntoni "emva", kuba kula maxesha ehlabathi, awusoze ube nesithunzi phakathi obhala ngokukodwa ngenyanga, ngulowo tweet zonke iiyure ze-2 okanye leyo emele ibhlog ehlangeneyo. Ngaphandle kwamathandabuzo wonke umntu unentlawulo yokuthatha inxaxheba.
Sithini eso sixa… siyakuqonda nje ngokuvumelana emva komcimbi weli-5 kaJulayi.
Nini na kuphi
Nge-5 kaJulayi ka-2017. Isikolo esiphakamileyo sobugcisa beGeodetic, iCartographic kunye nobunjineli beTopographic yePolytechnic University yaseValencia. Ukwakha i-7 I yeVera Campus. Igumbi le-0.1.
Ukuba nabani na unokuzimasa, akufuneki ukuba uphoswe. Kulabo bakude, banokuqhubeka nokusasaza kule dilesi ilandelayo:
Ziziphi ii-Geobloggers eziza kuthatha inxaxheba
Zonke ezi blogger zibhala rhoqo, amanqaku kwiibhloko zazo (ubuncinci kanye ngenyanga okanye zahlukile kwi-Intanethi), kunye nezinye izixhobo ezisetyenziswa kakhulu namhlanje kwi-geotechnologies.
Kubo bonke abantu abanomdla kwesi sifundo, ukusuka kwiingcali ukuya kubafundi, iinkampani, oosomashishini kunye nolawulo lukarhulumente.
Nangona inokuthi yenze utshintsho oluncinci, isicatshulwa senkqubo sele sicetywayo, esijolise ekwenzeni iqonga elibalulekileyo lengxoxo kunye nengxoxo malunga nomsebenzi, sisebenzisa amalungu alo anolwazi malunga nenyani kunye nemicimbi yangoku, kunye nokuseka ubudlelwane phakathi kweedigri ezahlukeneyo ezinxulumene noko BaneGeomatics njengekhonkco labo lokudibanisa.
I-11-12: 00: Siyakwamkelwa kwabafundi
I-12-12: I-30: Ukuvulwa koluntu kweso siganeko
I-ETS Geodetic, iCottographic and Topographic Engineering
I-12: 30-13: 30: Ukujika kwama-geobloggers:
Héctor (Geographica), David Piles (Strageo), Jorge del Río (Orbemapa), vlvaro Anguix (GVSig), Roberto (Gis & Beers), Óscar Martínez, (Ngaphezulu kwe-SIG), Antonio Rodríguez (Blog IDEE), Geofumadas (ividiyo), I-Nosolosig (ividiyo).
Yintoni oyifundeyo, wenzani kwaye ibhanti yakho ikuthetha ngani?
"Geoego"? uphawu lomntu, phakathi kokwanela kunye nentsebenziswano
Ngaba ubungakanani besayizi? abalandeli, phakathi kwamanani kunye nomgangatho
Endogamy? sebenzisana ukuze utyhile
Ziziphi izixhobo ozisebenzisayo?
13: 30-14: 10: Izixhobo kunye namanyathelo:
Abahlobo bemephu, i-CARTO, i-Creasolutions, i-eDiamsystems, i-Esri, i-Geoinquietos, i-GVSig, APHA.
14: 10-14: 40: Ingxoxo evulekileyo, phakathi kwabaphulaphuli kunye nemibuzo malunga ne-hashtag #geobloggers kwi-Twitter.
14: 45-15: 00: izigqibo kunye nokuvalwa
15: 15: Ukutya kunye nokunxibelelana
Gcina i-hashtag: https://twitter.com/hashtag/geobloggers?src=hash
Iindaba ze Umagazini weMephu
Post edlulileyo«Ngaphambilini iingongoma Ngenisa usike umfuziselo imigodi ngekhompyutha kwifayile CAD
Post Next 2 tricks ne Microstation: Repair ezonakeleyo iifayile kunye neengxaki DWG 3DOkulandelayo »